December 2019 - MinSayYar
31st December 2019 Admin
လယ်ယာမြေကို ၀ယ်၍ နေထိုင်ကြမည်ဆိုလျှင် ဘာတွေလို၊ ဘာတွေစစ်၊ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ?
လယ်ယာမြေကို ၀ယ်၍ နေထိုင်ကြမည်ဆိုလျှင်… ထီယု (ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံ) ”အကွက်ရိုက်ထားတဲ့ လယ်ယာမြေကို ဝယ်ရင် တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပါသလား” မိတ်ဆွေတစ်ဦးက စာရေးသူထံ လာရောက် ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။ ”အရောင်းအဝယ်ကတော့ လုပ်နေကြတာပဲ။ အချို့ငွေကြေးရှိသူ တွေက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြတာတွေလည်းရှိတယ်။ သွားကြည့်ရင် လယ် ကွင်းပြင်မြေကွက်အဖြစ်ပဲ တွေ့ကြရတယ်။ အချို့မြေကွက်တွေဆိုရင် ရေတွေဝပ်နေတာတွေလည်း ရှိတယ်” မိတ်ဆွေ အခုလိုနည်းပညာတွေ တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အရင်လို ၂လုံး၃လုံးထိုးနေတုန်းဘဲလား? အဆင်မပြေရင် ဒီ app လေးပြောင်းသုံးကြည့်ပါလား ”အခု မြေကွက်တွေကတော့ ခြံစည်းရိုး ကာထားတာတွေ့ရတယ်” ”သူငယ်ချင်းက ဝယ်မယ်စိတ်ကူးလို့လား” ”နောက်ပိုင်း လူနေထိုင်ခွင့်အတွက် လျှောက်ထားရင်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ လူနေရပ်ကွက်ဖြစ်လာ ရင်တော့ အဆင်ပြေမလားလို့” ”လူနေထိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက် အဆင့်ဆင့်ရှိတယ်။ အချိန်တော့ စောင့်ရမယ်” ”အဲဒီ အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပုံကို နားလည်ထားချင်လို့ […]
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ Website လိပ်စာများ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ Website လိပ်စာများ ၁။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန www.mofa.gov.mm ၂။သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန www.president-office.gov.mm မိတ်ဆွေ အခုလိုနည်းပညာတွေ တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အရင်လို ၂လုံး၃လုံးထိုးနေတုန်းဘဲလား? အဆင်မပြေရင် ဒီ app လေးပြောင်းသုံးကြည့်ပါလား ၃။ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အထွေထွေအုပ်ချပ်ရေးဦးစီးဌာန http://www.gad.gov.mm မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ www.myanmarpoliceforce.org မီးသတ်ဦးစီးဌာန www.fsd.gov.mm ၄။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန http://www.mod.gov.mm/ http://www.mod.gov.mm/zg/ ၅။ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန www.mba.gov.mm/ ၆။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန www.statecounsellor.gov.mm/ ၇။ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန http://www.moi.gov.mm/ http://www.mrtv.gov.mm/ http://www.iprd.gov.mm/ http://www.ppd.gov.mm/ http://www.npe.gov.mm/ ၈။ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန www.mora.gov.mm/ www.culture.gov.mm/ www.nlm.gov.mm/ www.dhrmyanmar.gov.mm/ www.fineartsdepartment.gov.mm/ ၉။ စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန […]
မြတ်စွာဘုရား ပါရမီဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ လေးအသချေင်္နဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ရေတွက်ပုံ
မြတ်စွာဘုရား ပါရမီဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ လေးအသချေင်္နဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ရေတွက်ပုံ ဗုဒျဓဘာသာဝငတြိုငြး သိထားသင့တြဲ့ ဂေါတမ မှတစြှာဘုရား ပါရမီဖှည့ကြငွ့ခြဲ့တဲ့ ကာလ လေးအသခွငြေျနှင့ြ ကမ်ဘာတဈသိနြး ရတှကေပြုံ အကှောငြးကို ဖောပြှ ပေးလိုကပြါတယြ။ လေးအသချေင်္ဆိုသည်မှာ — ၁။ သေလ အသချေင်္၂။ ဘာသ အသချေင်္၃။ ဇယ အသချေင်္၄။ ရုစိရ အသချေင်္ တို့ုဖြစ်သည်။ ၁။ သုမေဓာရှင်ရသေ့ ဗျာဒိတ်ခံယူသည့် ကမ္ဘာ၏ နောက်ဆုံးပွင့်တော်မူသော ဘုရားဖြစ်သည့် ဒီပင်္ကရာဘုရားနှင့် ကောဏ္ဍည ဘုရားတို့အကြား ဘုရားလုံးဝမပွင့်သော မရေတွက်နိုင်သည့် ကမ္ဘာများကို “သေလအသချေင်္” ဟူ၍ တစ်သချေင်္ ရေတွက်ရသည်။ မိတ်ဆွေ အခုလိုနည်းပညာတွေ တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အရင်လို ၂လုံး၃လုံးထိုးနေတုန်းဘဲလား? အဆင်မပြေရင် ဒီ app လေးပြောင်းသုံးကြည့်ပါလား ၂။ […]
မူးရုးနေတဲ့ဖခင်က အက်စစ်နဲ့ပတ်လို့ မျက်နှာတစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားတဲ့ သမီးလေး
မူးရုးနေတဲ့ဖခင်က အက်စစ်နဲ့ပတ်လို့ မျက်နှာတစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားတဲ့ သမီးလေး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Uttar Pradesh ပြည်နယ်၊ Fatehpur မှာ နေထိုင်တဲ့ အသက်7နှစ်အရွယ် ကောင်မလေး Julie Kumari ဟာ သူမ အသက်4နှစ်အရွယ်မှာပဲ ဖခင်ရဲ့ အက်စစ်နဲ့ပတ်ပြီး တိုက်ခိုက်မှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်တဲ့ Manish ဟာ အက်စစ်ကို ဇနီးဖြစ်သူဆီ ချိန်ရွယ်ပတ်ခဲ့တာဆိုပေမယ့် အပြစ်မဲ့ Kumari ကိုသာ တိုက်ရိုက်ထိမှန်ခဲ့တာပါ။သူမရဲ့ ဖခင် Manish ဟာ ဇနီးဖြစ်သူကို အခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ နောက်အိမ်ထောင် ပြုခဲ့တဲ့အတွက် ရန်ညှိုးထားကာ အက်စစ်အပြင်းစားကို အသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ Kumari ဟာ ချက်ချင်း ခေါင်းညာဘက်ခြမ်းကနေ အရေပြားကြီး ပျော်ကျသွားခဲ့ကာ ပုံပျက်ပန်းပျက် ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ […]
ရေမလာတာတစ်လရှိပြီမို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့ဆရာလေးတွေ ရမလာတာတစ်လရှိပြီမို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆရာလေးများ ရေ မ လာ တာ တစ် လ ရှိတော့ မှာ မို့ိ အား ကိုး ရာ ရှာ တာ ခု ထိ အ ဆင် မ ပြေ သေးလို့ ရ လို ရ ငြား ရုံး အ ထိ သွား ဟို အ ကူ ညီ တောင်း ဒီ အ ကူ ညီ တောင်း ကောင်း မ လာ နိုင် သေး ခု တော့ ကိုယ့် အား ကိုယ်ကိုး ရေ ပိုက် လိုင်း အ […]
သမီးအရင်းနဲ့သားမက်ကပစ်သွားတဲ့အဖွား သမီးအရင်းနဲ့သားမက်ကကားဝင်းမှာလာရောက်စွန့်ပစ်သွားတဲ့၈၅နှစ်အဖွား အ ဖွား နာ မည်က ဒေါ်ခင်ကြိုင် အ သက် (၈၅) နှစ် ဇာ တိ က ဝေါ မြို့နယ် ဆတ်သွား ကုန်း ရွာ က ပါ တဲ့ သား သ မီး (၅)ယောက်ရှိ ပါ တယ် လက်ရှိ စွန့်ပစ်တဲ့ သ မီး က အ ကြီး ဆုံး သ မီး တဲ့ မော်လ မြိုင်ကား ဝင်း မှာ လာ ချ သွား တာ က သား မက် ကိုယ် တိုင် သား (၃) ယောက်က […]
ရတနာပုံတက္ကသိုကျောင်းသူတစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေခြင်း ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ဓာတုဗေဒကျောင်းသူတစ်ဦး ပျောက်ဆုံးနေခြင်း ၃ ဝ.၁ ၂.၂ ၀ ၁ ၉ မ န္တ လေးရ တ နာ ပုံ တ က္က သိုလ် ဓာ တုဗေဒ ဒု တိ ယ နှစ် အ ခန်း (D)က ကျောင်း သူ မ ပ ပ သိန်း ပျောက်ဆုံး နေ သည်မှာ (၂) ရက်ရှိ ပြီ ဖြစ် သည် မ ပ ပ သိန်း သည် အ ဆောင်မှ (၂၈) ရက် စ နေ နေ့ မ […]
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဖခင်က အက်စက်နဲ့ပတ်လို့ မျက်နှာတစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားတဲ့ သမီးလေး အဖြစ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဖခင်က အက်စက်နဲ့ပတ်လို့ မျက်နှာတစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားတဲ့ သမီးလေး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Uttar Pradesh ပြည်နယ်၊ Fatehpur မှာ နေထိုင်တဲ့ အသက်7နှစ်အရွယ် ကောင်မလေး Julie Kumari ဟာ သူမ အသက်4နှစ်အရွယ်မှာပဲ ဖခင်ရဲ့ အက်စစ်နဲ့ပတ်ပြီး တိုက်ခိုက်မှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်တဲ့ Manish ဟာ အက်စစ်ကို ဇနီးဖြစ်သူဆီ ချိန်ရွယ်ပတ်ခဲ့တာဆိုပေမယ့် အပြစ်မဲ့ Kumari ကိုသာ တိုက်ရိုက်ထိမှန်ခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ ဖခင် Manish ဟာ ဇနီးဖြစ်သူကို အခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ နောက်အိမ်ထောင် ပြုခဲ့တဲ့အတွက် ရန်ညှိုးထားကာ အက်စစ်အပြင်းစားကို အသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ Kumari ဟာ ချက်ချင်း ခေါင်းညာဘက်ခြမ်းကနေ အရေပြားကြီး ပျော်ကျသွားခဲ့ကာ […]
နှစ်သစ်ကူးအတွက် အထူးသတိပေးစာလေးပါ လူငယ်များ ဆင်ခြင်နိုင်ပါစေ
နှစ်သစ်ကူးအတွက် အထူးသတိပေးစာလေးပါ လူငယ်များ ဆင်ခြင်နိုင်ပါစေ မကြာမီရောက်လာတော့မည့် ၂၀၂၀ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်တွင် မူးယစ်သောက်စားပျော်ပါးပြီး မော်တော်ယာဉ်များကို မဆင်မခြင်မောင်းကြမည့် ယာဉ်မောင်းများကို သတိပေးလိုက်သည့်အနေနဲ့ ခေါင်းတလားရောင်းချသည့် ဆိုင်တစ်ဆိုင်က အထူးပရိုမိုးရှင်းပွဲလေးကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက် ညနေပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဆာရာဘူရီခရိုင် ခေါက်ရိုင်စီရင်စုမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ခေါင်းတလားအရောင်းဆိုင်ရှေ့ ကားလမ်းမနံဘေးမှာ အကမယ် ၃ ဦးက မြူးကြွတဲ့ တေးသွားစည်းချက်တွေနဲ့အတူ ဆင့်ထပ်ထားတဲ့ ခေါင်းတလားတွေရဲ့ရှေ့မှာ ကပြရင်း လမ်းသွားလမ်းလာတွေနဲ့ အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်ရှေ့မှာလည်း “အရက်မူးပြီး ကားမောင်းမည့်သူများ အခေါင်းကြိုတင်မှာထားနိုင်ပါတယ်” ဆိုတဲ့ စားသားကို ဆိုင်းဘုတ်အကြီးကြီးပေါ်မှာ ရေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကားတွေကို ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်း ဝေငှပေးနေကြပါတယ်။ ခေါင်းတလားဆိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ အသက် ၂၇ […]